🥇 ▷ LineageOS ayaa kordhisay deeqda waxayna ugu dambeyntii gaartay OnePlus 6T iyo 7 Pro ✅
LineageOS ayaa kordhisay deeqda waxayna ugu dambeyntii gaartay OnePlus 6T iyo 7 Pro
LineageOS waa ROM-ka uu soo xushay qof kasta oo raba inuu ka tanaasulo noocyada Android ee soosaarayaasha. Waxaa loo habeeyay aalad kasta oo ay ku shaqeyso waxayna diyaar u tahay inay siiso isticmaaleyaasha ugu wanaagsan,
Inbadan ayaa ah jaangooyooyinka iyo moodooyinka la jaan qaadi kara, inbadan oo kamid ah horeyba waa dhamaadka nolosha waxayna ka tanaasuleen magacyadooda. Nooca tijaabada ee ugu dambeeya ee LineageOS 16 ayaa hadda keenaya wax cusub. Sidoo kale OnePlus 6T iyo 7 Pro hadda waa la taageerayaa.
Akhbaar wanaagsan oo ku saabsan LineageOS waxay soo bandhigaan
Muddo sanado ah, LineageOS waxay awood u siisay inay siiso taleefanno badan oo casri ah nolol cusub. Noocyadan sumad-sanadeedku hadda waa kuwo aan is-waafajin karin sidaas darteedna waxay helayaan ROM-ka caadadan oo ay la jaan qaadaan aaladan. Taageero ayaa jira oo cusbooneysiintu waa joogto.
Waa iska caadi in ROM-yada loo kordhiyo kooxo cusub, taas oo muujineysa in kooxaha horumaraya ay ka go'an tahay kobcinta. Noocyada cusubi had iyo jeer waxay keenayaan warar, iyagoo eegaya waxa mashruuca AOSP uu keenayo iyo wax kasta oo lagu horumariyo isla waqtigaas.
Nooca ugu dambeeyay ee LineageOS 16, hal habeen, wuxuu keenay taageero qalab cusub. Waxaan ka hadlaynaa OnePlus 6T iyo 7 Plus. Kuwani waa moodello dhawaanahan u samaysnaa magaca Shiinaha oo aad uga fog liiska qalabka isticmaali kara ROM-kaan.
OnePlus ayaa hadda si wanaagsan loogu matalayaa ROM-kaan
Sida qalabka kale ee la jaan qaada ee LineageOS, moodooyinka cusub waxay sidoo kale leeyihiin magacyo. Sidaa darteed, OnePlus 6T waxaa loo yaqaan fajita halka 7 Pro loo yaqaan guacamole. Shaqada taageerida 2-da taleefanno ee casriga ah waxaa sameeyay LuK1337, PeterCxy iyo Tortel. Labaduba waxay helayaan xisaabinta cusub kuna saleysan LineageOS 16 (Android 9 Pie).
La yaab maahan, ROMs-yadaani inay la jaan qaadayaan ROM-yada oo keliya. Iyada oo OxygenOS ay hayso diiwaan joogto ah oo wararka joogtada ah, xiisaha loo qabo ROM-gu wuxuu ku sii fogaan doonaa kuwa casriga ah. Xitaa sidaas oo ay tahay, qof kasta oo doonaya khibrad ka sii nadiif ah wuu dooran karaa waana inuu dooranayaa soo jeedintan cusub.
Waxa kale oo muhiim ah in la arko kooxahan sare ee cusub ee soo galaya LineageOS. Sidaa darteed, soojeedintu waa kala duwan tahay oo waxay kicisaa xiisaha badan ee ROM-kaan, kaas oo had iyo jeer dib loo soo celiyo oo la wanaajiyo.